यदि तपाईंलाई अंग्रेजी-देखि-पञ्जाबी आवाज वा पाठ अनुवाद चाहिन्छ – Vocre
अंग्रेजीबाट पंजाबी अनुवाद
एक पंजाबी अनुवादक भर्ना बिना पंजाबी को अंग्रेजी अनुवाद गर्न को लागी आवश्यक छ? चाहे तपाइँ विदेश मा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ वा शिक्षा अनुवाद को आवश्यकता छ, हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं.
अन्य संस्कृतिहरूसँग सञ्चार गर्दै सधैं सजिलो हुँदैन. अंग्रेजी लाई पंजाबी मा अनुवाद गर्न को लागी कुनै जर्मनिक-देखि-पूर्वी भाषा अनुवाद को रूप मा गाह्रो छ. यदि तपाईंलाई अंग्रेजी-देखि-पञ्जाबी आवाज वा पाठ अनुवाद चाहिन्छ, हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं.
पंजाबी भाषा पाकिस्तान भरि बोलेको छ र यो देशको सबैभन्दा लोकप्रिय भाषा हो. पंजाबीमा, वाक्य संरचना एक विषय निम्न छ, वस्तु, क्रिया ढाँचा. वर्णमाला समावेश गर्दछ 35 अक्षर र वर्णमाला फरक छ, तपाइँ पाकिस्तान वा भारत को यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ कि निर्भर गर्दछ.
पंजाबी (पनि पंजाबी हिज्जे) पाकिस्तान र भारतमा बोल्ने भाषा हो. धेरै 125 मिलियन मातृभाषीहरू पंजाबीलाई उनीहरूको पहिलो भाषा भन्छन्. यो भारतको ११ औँ सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा हो. 130 विश्वभर मा मिलियन मानिसहरु भाषा बोल्छन्. त्यहाँ अरू पनि छन् 250,000 संयुक्त राज्य अमेरिका मा बस्ने पंजाबी भाषी अमेरिकिहरु.
यदि तपाईंलाई अंग्रेजी-देखि-पञ्जाबी आवाज वा पाठ अनुवाद चाहिन्छ. वा यो एक जर्मनिक र रोमान्टिक भाषा - यो दुई Germanic भाषाहरु को रूप मा अनुवाद को रूप मा सरल छैन.
पंजाबीको प्रमुख बोलीहरू समावेश छन्:
जातकी, जंगली, र रचनावी
Jhangochi र Jhangvi
पंजाबी विद्यार्थीहरूले शब्दहरू चिन्न सक्छन्, धेरै अ words्ग्रेजी शब्दहरू हिन्दू र उर्दू शब्दहरूबाट लिइएको हो, केरा सहित, जंगल, र निर्वाणा. यद्यपि, हिन्दू र उर्दू र अंग्रेजी साझा गर्ने शब्दहरू थोरै र धेरै बीचमा छन्. वर्णमाला अंग्रेजीको वर्णमाला भन्दा पूर्ण भिन्न छ, तेसैले तपाइँ नयाँ शब्दहरु को अतिरिक्त नयाँ अक्षरहरु जान्न को लागी आवश्यक छ.
यदि तपाईंलाई अंग्रेजी-देखि-पञ्जाबी आवाज वा पाठ अनुवाद चाहिन्छ
अनलाइन पंजाबी सिक्ने कोशिश गर्दै? यदि तपाईंलाई अंग्रेजी-देखि-पञ्जाबी आवाज वा पाठ अनुवाद चाहिन्छ, जस्तै Vocre अनुप्रयोग, मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी.
पंजाबी शब्दकोशमा लाखौं शब्दहरू छन्. वर्णमालालाई गुरुमुखी वर्णमाला भनिन्छ र छ 35 अक्षरहरु. शब्द गुरुमुखी अनुवाद, “गुरुको मुखबाट,”र यो पंजाबी शब्दबाट आएको हो, ‘guramukhī '.
अंग्रेजी पंजाबी अनुवादकहरू प्रायः प्रायः चार्ज गर्दछन् $100 एक घण्टा. यदि तपाईंलाई अनुवाद गरिएको ठूलो पदहरू चाहिन्छ, लागत अत्यन्त महँगो हुन सक्छ. यदि तपाईंलाई अंग्रेजी-देखि-पञ्जाबी आवाज वा पाठ अनुवाद चाहिन्छ, हामी एक भाषा अनुवाद सफ्टवेयर कार्यक्रम वा अनुप्रयोग मा पाठ inputting सिफारिश.
अ English्ग्रेजीदेखि पंजाबी अनुवाद मात्र थप चाहान्नुहुन्छ? हामी निम्न भाषाहरूमा अधिक अनलाइन अनुवाद प्रस्ताव गर्दछौं: